Ejipta : Ahiahy noho ny fampijaliana ireo bilaogera roa voafonja · Global Voices teny Malagasy
Ejipta : Ahiahy noho ny fampijaliana ireo bilaogera roa voafonja
Voadika ny 26 Janoary 2019 20:23 GMT
Nampijaliana nisaraka tao amin’ny foiben’ireo Hery fiarovana Ejipsiana ireo bilaogera roa. Nandritra izany, navotsotra ny iray tamin’izy ireo, raha notsaboina tao am-ponja kosa ilay faharoa.
Nitantara ny filazan’i Adel izay noafahana ny 10 Martsa (2009) ny gazety Al-Dostour:
La torture comprenait des coups de fouet, la suspension et des électrochocs, Mohamed Adel a soutenu que chaque fois il y avait des médecins qui venaient le soigner pour effacer les traces sur son corps afin de cacher [les preuves de torture].
Nahitana kapoka karavasy, fanatonana ary fandorona tamin’ny herinaratra ny fampijaliana, nilaza i Mohamed Adel misy foana ny dokotera tonga mitsabo azy hamafa ny ratra amin’ny vatany mba hanafenana izany [ ireo porofon’ny fampijaliana].
Nanampy ihany koa ilay gazety fa niboridana nandritra ny 5 andro i Mohamed. Nandritra ireo fotoanan’ny fampijaliana dia nanontany azy ireo ny manampahefana momba ny bilaogera sy ny mpanao gazety ao Ejipta ary ny zavatra fantany momba ny kaontin’izy ireo, sy ny heviny momba an’i Gaza sy Hamas ihany koa.
Nanjavona nanomboka ny Zoma 21 Novambra 2008 i Adel izay namelona ny bilaogy Maeit. Nanambara ny Tambajotra Arabo misahana ny Zon’Olombelona (ANHRI) fa notanana tao amin’ny foiben-toeran’ny Hery Fiarovam-pirenena tao Kairo i Adel, dimy andro taty aoriana. Voasambotra izy noho ny sary iray nampiseho azy niaraka tamin’ny olona iray avy amin'ny Hamas. Nalaina ity sary ity raha nandray anjara tamin’ny valalamanjohy hanavotana olona nizotra nankany Gaza i Adel.
Talohan’ny nanafahana azy dia nanomboka nitokona tsy nihinan-kanina i Adel ny 28 Febroary (2009) mba hanoherana ny fanokana-monina azy sy ny fametrahana azy amin'ny toerana mihiboka.
I Dia’ el Din Gad kosa tetsy andaniny dia nokarakarain’ny dokotera tao amin’ny hopitaly ary afaka nahita ny fianakaviany sy ny mpisolovava iray tao amin’ny fonja ao am-pidirana ny renivohitra Kairo.
Nosamborina tamin’ny 6 Febroary (2009) lasa teo i Dia’el Din, izy no mpanentana ny bilaogy Sout Ghadeb (Feo tezitra) izay nanehoany matetika ny fomba fijeriny sy ny tsikera nataony tamin’ny politika Ejipsiana momba an’i Gaza. Niantso ny Filoha Hosni Mubarak hoe ‘’Ehud Moubarak’’ ihany koa izy hanondroana ny Minisitry ny Fiarovana Israeliana Ehud Barak. Nanamarika ny raharaha momba azy tao amin’ny fanambarana vao haingana ny Amnesty Internetional izay mihevitra an’i Gad ho ‘’gadra noho ny fanehoan-kevitra’’ :
Au cours des interrogatoires, les agents de sécurité ont plusieurs fois menacé de le torturer et de le maltraiter. D'autres prisonniers ont été apparemment amenés et torturés devant lui à coups d’ électrochocs. Il avait les yeux bandés en permanence, mais il entendait les hurlements de douleur, ceux des personnes qui étaient en train d'être torturées.Dia’ el Din Gad n'a pas été battu, mais il a été agressé verbalement et menacé de ne jamais être libéré. Il n'a pu avoir aucun accès à des médicaments, malgré des difficultés respiratoires dont il souffrait avant son arrestation et pour lesquelles il prenait des analgésiques et d'autres médicaments.
Nandrahona ny hampijaly azy sy ny hanao tsinontsinona azy matetika ireo mpitandro ny filaminana, nandritra ny famotopotorana natao taminy. Toa nentina sy nampijaliana teo anoloany tamin’ny alalan’ny fandoroana tamin’ny herinaratra ireo gadra hafa. Notapenana foana ny masony, kanefa henony ihany ny kiakiakan’ny fanaintainana nahazo ireo nampijaliana. Tsy nodarohana i Dia’el Din Gad saingy nanaovana teny mahery sy norahonana ho tsy havotsotra intsony izy. Tsy nahazo nihinana ny fanafodiny izy, na dia teo aza ny aretin’ny fitaovam-pisefoana nahazo azy talohan’ny nisamborana azy, izay tokony hihinanany fanafody manala fanaintainana sy ny fanafody hafa .